UAE pa Fast Track | Zivhura zvekuvandudzwa nekusika
UAE paMutambo Wokutsvaga
Simba rakanaka uye rakanaka kubva ku Dubai
Dai 30, 2019
Nzira Yokuwana Mushanduri weChina mu Dubai?
Yakabudiswa na Dubai City Company at June 2, 2019
IUEE yakauya pakutanga pasi rose muGreat Practices, yechipiri muInternet Trade, Productiv and Efficiency, Basic Infrastructure, Maitiro uye Maitiro uye chechitatu pasi rose muHurumende yeMari uye Mutero wemitero.
United Arab Emirates, UAE, yakachengetedza hutungamiri hwayo mudunhu uye yakaisa yechishanu pamakwikwi epasi rose, maererano neWorld Competitiveness Yearbook 2019, yakabudiswa neSwitzerland-based International Institute for Management Development, IMD. Nhasi "UAE inopinda pamusoro mashanu kekutanga," akadaro IMD World Competitiveness Rankings.
2021 - 2030: Iyo UAE ichave yakawana Abu Dhabi Economic Vision 2030, Yakatora Vision 2030 (Abu Dhabi), Chirongwa Abu Dhabi 2030, Abu Dhabi Transportation Mobility Management Strategy, Surface Transport Master Plan (Abu Dhabi), Dubai Autonomous Transportation Strategy, Dubai Industrial Strategy 2030, Dubai 3D Kudhinda Isu uye UN's 2030 Agenda. (Portal ye UAE Hurumende)
Usakanganwa vaCiti paurwendo runokurumidza kuenda ku Smart Future.
Izvi zvakanyatsogadzirwa zvepakati-nguva yekugadzirisa mamiriro ezvinhu ari kutungamirira zvinhu zvose uye kudzivisa kushandiswa kwemazuva mashoma muurongwa, tinogona kuona kune dzimwe nzvimbo dzenyika.
Simba rakaberekerwa muCalmness
Anenge munhu wose akazviona pane imwe nguva kana imwe mune imwe nzvimbo yepamusangano kumativi ose enyika: Kurumbidzwa kwezvinhu zvinotyisa, mabasa anoshamisa, Olympus ekukwanisa kunoitwa nevakuru vebhizimisi munyika.
Izvo zvinosarudzwa ndezvemufaro unosangana musangano mumamiriro ekuremekedza uye kuteerera kwakasimba. Mumwe nomumwe ari kutora chikamu chekusika nekukura kwezivo.
Nhanho kusvika kune ramangwana rakagadzirwa nemararamiro.
Panzira yekuenda kuUAE
Mafuta akafuma nyika yeGCC ari kutanga kuenda kune ruvara uye akazvipira kusiyanisa hupfumi hwavo kure nemafuta. Kunyange zvazvo chifambiso chikuru chekuedza kusiyanisa kwekutengesa kuderedza kusagadzikana kwekutengesa kwemafuta emafuta, nyika dzeGCC dzinoedzawo kutarisana nekuwedzera kwekuda kwekuita pane kushanduka kwemamiriro ekunze.
Maonero ezuva nezuva pazviziviso zvekutsvaga ari kuratidza nhamba inowedzera yemapurogiramu akaoma mumharaunda. UAE iri munzira yekuderedza carbon carprint.
Usakanganwa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Dubai yakaramba iri nzvimbo inoyevedza yepasi rese kune yekune dzimwe nyika inivhesitimendi (FDI) sezvairekodha 41 muzana-pane-gore kukura muFDI gore rakapfuura kusvika Dh38.5 bhiriyoni, ichiisa emirate munzvimbo yekutanga muhuwandu hwehuwandu hwemapurojekiti eFDI uye kuyerera kukuru. (Khaleej Times)
Kutarisa kunze kwehwindo pane rutsvuku rwemasitroti-mutsara ishoko rinoshamisa remasimba ehupfumi. Zviratidzo zvokutanga zvekugadza vatambi vepasi pose vari pakatarisana, asi kuchine zvakawanda zvokuita.
Kutengesa hutano hwemunharaunda kumisika yepasi rese ndiyo danho rinotevera rinokosha.
"Makore gumi nemakore akapfuura vakaona kukura kukuru kwechiverengero chevadzidzi veMiddle East vachizadzisa chikamu chevadzidzi vavo vepunivhesiti kune dzimwe nyika. Sezvo nhamba yose yevadzidzi vanofambisa kune dzimwe nyika inokwira gore negore, nyika dzeMiddle East haisi kungoita zvishoma chete, asi kuwedzera kukurumbira kwavo kuenzanisira. "(TopUniversities.com)
Kushanyira makuniyuta akachengetedzwa zvakanaka munharaunda iyi inonakidza. Nedzidzo dzakagadzirirwa zvakanaka, idzi ndidzo nzvimbo dzaunokwanisa kusangana nemafungiro akazaruka, vechidiki vakadzidza. Kukurukura nezveramangwana neunyanzvi chinhu chinoita kuti munhu ave neruzivo rwakawanda uye anovhura manzwiro matsva uye ehupfumi.
UAE iri kutsanangura nzira yekushandisa zvingaita zvechizvarwa chidiki. "Anokudza Shamm bint Suhail bin Faris Al Mazrui, ane makore 22, akagadzwa seAU Minister weHurumende yevechidiki vezvinoitika mune vechidiki mudare remakurukota, rakaziviswa muna Kukadzi 2016. Nekudaro, ndiye mushushi wechidiki pane pasi. Mabasa ake anotarisana nekumiririra nyaya dzechidiki uye zvishuwo ku Ministerial Council, kuisa zvirongwa zvebudiriro uye nzira dzekuvandudza masimba evechidiki, mukuwedzera mukushandisa simba ravo mune dzakasiyana siyana. "(Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi, Dare remakurukota)
Usamira kuti uwedzere ruzivo rwehupenyu.
"Dubai-Abu Dhabi 12-minute Hyperloop yakazarurwa ne2020" - "Kuvakwa kweimwe yemishonga yakakura yakasimba yeSolar (CSP) munyika yose yakatanga muUnited Emirates (UAE)." - "Pasi peMitemo yeZvake Highness Shaikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, Vachigaro wePurezidhendi uye Prime Minister weUAE uye Mutongi weA Dubai, Dubai Dubai Foundation pamwe chete Migwagwa yeDhailand nekutakura Yakatangira 'Dubai Autonomous Transportation Strategy'. "-" Ita Dubai 3D yekudhinda Dhizha ichaita kuti Dubai ive nyika ye 3D kudhinda. "
Tiri kurarama munguva yekuvhiringidzika, uko mararamiro ehupenyu huri kupfupisa. Nharaunda imwe neimwe munyika ino iri kutarisana nechinetso neyese kana mamwe mapepa emagetsi emhando. Dzimwe nguva tinogona kuwana zviitiko zvinonakidza kubva kumayunivhesiti uye masangano ekutsvakurudza, asi kushandiswa kwezvinhu izvi zvinotyisa zvinopedzisira zvishoma nezvishoma mumasango ehurumende. Iko kufara kuona kuti Dubai inotora sei njodzi yekutungamirira kuburikidza nekushandisa Key Enabler mune unyanzvi hwemangwana.
Ramba uchishanda uye udzidze kubva pakushanda.
Unhu hwekusika mune zvetsika zvakasiyana
IUAE yakaona kuwedzera kwehuwandu hwevanhu mukati memakore mashomanana apfuura nekuda kwekukura kukuru mumatunhu akasiyana-siyana ezvematongerwe enyika ayo anotungamirira kune vashandi vanobva mumarudzi akasiyana-siyana nemasangano ezvitendero. Kubvira ku 4.1 mamiriyoni mu2005, vanhu veUAE vakakurira kuva 8.3 mamiriyoni ekuguma kwe2010. Kunze kweizvi, nhamba yeUAE vagari vepasi isiri mamiriyoni e1 (947,947). (UAE Government)
Misangano muDhaibhi inoshanda pamishandirapamwe mitsva uye inyanzvi yekutengeserana inoratidzwa ne kusanganiswa kwemarudzi kubva kumativi ose enyika. Kukwanisa, ruzivo uye tsika dzechimiro zvakabatanidzwa kushanda munguva yemberi. Inofananidzwa nenyika dzakadai seGermany, iyi inzvimbo yakasiyana zvakakwana yekubatana muboka. Mukusanganiswa kwakasiyana-siyana, mbiru dzekuzivikanwa kwevagari vemo dziri kupa kugadzikana kwekugara munharaunda yakagadzikana.
mhedziso nokuda kweUAE paMutambo Wokutsvaga
Kuenzanisa kuyanana kwenyika uye tsika dzakasiyana-siyana dziri kuvaka nheyo yakasimba munzira inoenda kune Smart Future.
Munyori: Roland Spranz - Bridging Europe, Middle East ne Africa
Kukosha neInnovation UG - Salzatal - Germany
Hilal Engineering Consultancy - Sohar - Sultanate yeOman
Link to Linkedin - UAE paTest Track
Dubai City Company ikozvino kupa zvakanaka guides Mabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.
12 zvikanganiso zvinowanzopfuura vafambi havafaniri kuita panguva yeDaily Metro
DUBAI: Muenzaniso Wekusimudzirwa
Ndapota Login kupindura
1 Nzira yakasangana sei
Vakawanda vakaita sei
Hottest how thread
0 Anonyora sei
mitsva yekutsvaga mhinduroitsva mhinduro kumashoko angu